Kuleli hora uStacey uyiqhawe | Scrolla Izindaba
Kuleli hora uStacey uyiqhawe
UStacey Abrams ungumlandeli onamandla kakhulu weqembu le-Democratic esifundazweni sase-Georgia.
Lapha inselelo kamengameli uJoe Biden uhambe phambili ngamavoti ebhekene noDonald Trump emahoreni asekuseni angoLwesihlanu.
I-Georgia ingesinye sezifundazwe eningizimu esinomlando wobugqila kanye nesitayela sobandlululo saseMelika.
Uma ithathwa yodwa iGeorgia ibinganela ukunikeza uBiden amavoti okhetho awadingayo ukuze anqobe ukhetho futhi abe nguMengameli.
Kepha ngokuhola kwakhe ngamavoti angaphansi kwenkulungwane kwizigidi ezinhlanu kuhulumeni, nezinkulungwane zamavoti ezisazobalwa, kusase kusha ukuthi umbuso ungasho ukuthi uyawina.
UAbrams walahlekelwa ngokulambisa emncintiswaneni wombusi wezwe ngonyaka wezi-2018 ngoba ababenamandla babekwazi ukuvimbela amakhulu ezinkulungwane zabantu abamnyama ukuthi bavote.
Kusukela lapho usebenze ngokuzikhandla ukubhalisa instha engaphezu kuka-800 000 ikakhulukazi intsha yabantu abamnyama.
Uma uBiden ebambelela kuzoba okokuqala ngqa ukuthi ama-Democrats anqobe i-Georgia eminyakeni engama-28.
I-Georgia futhi yisifunda sekhaya likaJohn Lewis obelwela amalungelo omphakathi, owashona ngoNhlangulana, kanye nomholi omkhulu owayelwela amalungelo omphakathi uMartin Luther King owabulawa kowezi-1968.
I-Georgia izoqhubeka nokugqama ngemuva kokuthi ukhetho lobengameli luphele.
Ngenxa yemithetho yokhetho eyinkimbinkimbi, zombili izihlalo ze-Senate esifundazweni zizoqala kabusha ngoMasingana
Uma ama-Democrats ewanqoba kuzobanika amandla okuphatha indlu ephezulu, i-Senate, e-Washington kanjalo ne-White House kanye nendlu yama-Representatives.
Izinkundla zokuxhumana ngoLwesihlanu ekuseni bezincoma u-Abrams, iqhawe lesikhathi esizayo kwezepolitiki eMelika.
Omunye umlandeli we-twitter ubhale wathi: “Ngokwesaba abesifazane yonke indawo ngaso sonke isikhathi, kodwa ngalesi sikhathi kusatshwa uStacey Abrams kakhulu. Umuntu wesifazane ngempela.”
Futhi uJohn Legend ujabulise abalandeli bakhe ngengoma ethi “I-Georgia isengqondweni yami.”
Njengoba uvalo luqhubeka emhlabeni wonke lokubuka imiphumela yokhetho lwaseMelika, owesifazane omnyama ovela eningizimu uvele njengeqhawe kuleli lehora.